Saraakiil lagu dilay dalka Masar - BBC News Somali
Image caption Weerarro is daba joog ah ayaa ka dhacay Masar tan iyo markii Mursi xukunka laga tuuray
Labo sarkaal oo ka tirsan ciidanka Masar ayaa siyaabo kala duwan maanta loogu dilay magaalooyinka Qaahira iyo Al-Iskandariyah
Sida wararka Qaahira ka imaanya ay sheegayaan, subaxnimadii Arbacada, ayaa lagu dilay magaalada Qaahira Sareeye Guuto, Axmed Zaki oo ka tirsanaa ciidanka booliska masar, ka dib markii gaarigii uu watay lala beegsaday walxaha qarxa.
Dhanka kale sarkaal u hadlay ciidanka booliska magaalda Al-Iskandariya ayaa isaguna sheegay in magaaldaasi isla maanta lagu dilay sarkaal ka tirsanaa ciidanka boliiska kaddib markii xabbad lala eegtay isagoo ku jirey howlgallo lagu baacsanayey kooxo hubaysan oo uu ku tilmaamay argagixiso in ay yihiin.
Waxaana sarkaalku intaa ku daray in kooxihii la cayrsanayey mid laga dilay ku kalena laga qabtay.
Bilihii ugu danbeeyey ayaa masar waxaa ka jirey weeraro lagu qaadayey ciidamada booliska iyo kuwa millatariga.
Waxaana weeraradaasi sheeganayey ururro hubeysan oo la kala yiraahdo Ansaarta Baytul Maqddis iyo ururka Ajnaadu Masar, oo labaduba ka howlgala gobolka Sinai.
Xukuumadda Masar ayaa rabashadaha dalkaasi ka socda ku eedeeysa ururka Ikhwaanul Muslimiinka in ay ka danbeeyaan rabshadahaasi tan iyo markii la riday madaweynhii hore ee masar Mursi.
Hasayeeshee Inkhwaanka wey iska fogeeyeen in ay ku lug leeyihiin iska hor imaadyo hubeysan.
Waxayna sheegeen in waddo nabad ah ay u marayaan mucaaridnimada ay ugu soo horjeedaan "afgembigii militeri" ee dalkaas ka dhacay.
Falalkaan dilalka ah ayaa waxay ku soo beegmayaan iyadoo dalka masar doorasho madaxtinimo ay ka dhacayso bisha may ee soo socota, taas oo la filayo in uu ku guuleysto Jeneraal Cabdifitaax al siisii oo horey u ahaa wasiirka gaashaandhigga dalka Masar.
Hasayeeshee dadka ka faalloodawaxay is weydiinayaan in Jeneraalku uu nabad ku soo dabbaali doono Masar iyo in kale.
Maxkamad 529 ruux dil ku xukuntay Masar
24 Maarso 2014